နေအိမ် / အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက် / နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်ခြင်းမှတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရုံးစနစ်ဖို့
07/01/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ဥရောပသမဂ္ဂအကြားမကြာသေးမီက-အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဘက်စုံစီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အတွက် (အမေရိကန်) နှင့်ကနေဒါ, နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်ဖို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအငြင်းပွားမှုများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အီးယူနှင့်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကရှေ့ဆက်ထားလျက်ရှိသည်. ဒါကအမြဲတမ်းနိုင်ငံအများပါဝင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာတရားရုံးစနစ်တည်ထောင်နိုင်ရန်အငြင်းပွားဖွယ်အဆိုပြုချက်ဖြစ်ပါသည်.
စကားလုံး 'တရားရုံး '' Cetas ပေါ်လာပါဘူး, အရာ, အစား, '' တစ်ဦးအပြန်အလှန်အားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းမျှော်မှန်းခုံရုံး '', အဆိုပါပါတီများတစ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး '' တည်ထောင်ရန်သည်အထိခုံရုံး''. Cetas မိတ္တူပထမဦးဆုံးတခြားနေရာသည်ထင်ရှားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရုံးစနစ်များအတွက်အဆိုပြုချက်ကို၏အသုံးအနှုန်း, အထူးသအီးယူနှင့်အမေရိကန်အကြားနေတုန်းပဲ-ညှိနှိုင်းအရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမိတ်ဖက်အတွက်. ဒါဟာအစအီးယူ-ဗီယက်နမ်လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အတွက်ထည့်သွင်းထားသည်.
Cetas လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးသော်လည်း (နှင့်သဘောတူညီချက်ရေးထိုးဆိုင်းငံ့နေကြ), ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခန်း၏ဤအပိုငျးနေဆဲအခြေအတင်ဆွေးနွေးနေသည်. ဒါကအဆိုပြုချက်ကိုများ၏အလွန်အမင်းအငြင်းပွားဖွယ်သဘောသဘာဝသက်သေအထောက်အထား. တကယ်တော့, ကနေဒါနှင့်အီးယူရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနိဂုံးချုပ်ပါပြီ 40 အမြဲတမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရုံးစနစ်နှင့် ပတ်သက်. ဂျီနီဗာရှိအခြားနိုင်ငံများ၏.
အဆိုပါအဆိုပြုချက်ကိုထိုကဲ့သို့သောဗဟိုအယူခံယန္တရားအဖြစ် "အာမခံချက်" ပါရှိသည်, မြင်သာပြဋ္ဌာန်းချက်, အမြဲတမ်းတရားသူကြီးတွေ, စသည်တို့ကို, ကြောင်းပါမယ်ဟာအထိခိုက်မခံဘာသာရပ်ကိစ္စသေချာပါလိမ့်မယ်, မကြာခဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်ထဲမှာဆကျဆံ, စနစ်တကျထက် ပို. "တရားဝင်" ခန္ဓာကိုယ်ကကိုင်တွယ်တာဖြစ်ပါတယ် သင့်ရာကို ခုံသမာဓိခုံရုံး.
ထို့အပြင်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရုံးစနစ်ကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏အလွဲသုံးစားမှုနဲ့တူကိစ္စရပ်များနှင့်ခုံသမာဓိလူကြီး၏အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခများသေချာစေရန်ရည်ရွယ်ထားပါလိမ့်မယ်, မကြာခဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိဖန်ဆင်းထားတဲ့၏စွပ်စွဲချက်, ကျင့်ဝတ်အပေါ်ပြဌာန်းချက်မှတဆင့်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မည် (ဥပမာ,, '' နှစ်ဆ hatting '' တစ်ဦးတားမြစ်ချက်), အရည်အချင်းများနှင့်တရားသူကြီးတို့၏ကျပန်းတာဝန်ကျတဲ့နေရာ. ဒါဟာအစထိုကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက Third-party ရန်ပုံငွေ၏ထုတ်ဖော်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ကဲ့သို့အချို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပြဌာန်းချက်ရှိပါတယ်.
သို့သော်ငြားလည်း, ဒီအဆိုပြုချက်ကိုလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ဥပဒေရေးရာပြဿနာများ၏နံပါတ်ထုတ်ပေး, သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိအသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းကိုသတိထားဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရုံးစနစ်ထိုကဲ့သို့သောလျှို့ဝှက်ချက်များအဖြစ်ခုံသမာဓိအချို့ဆွဲဆောင်မှု features တွေလျှော့ချမယ်လို့ (ပြီးသားအတန်ငယ် UNCITRAL ခုံသမာဓိများအတွက်လျော့) adjudicators ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ပါတီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်, ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းစဉ်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ကြာချိန်အသစ်တစ်ခုအဖွဲ့အစည်းငွေကြေး. "၏သော့ချက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုအဘယ်သူသည်ဆုံးဖြတ်တဲ့သူဆုံးဖြတ်"အစနှစ်ဦးစလုံးပါတီများ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူ inconsistent စေခြင်းငှါတစ်ဦးထုံးစံ၌ပြေလည်ခဲ့ပြီး. ပျမ်းမျှ ICSID ခုံသမာဓိပြီးသားအမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ပိုလျှံအတွက်ကုန်ကျ 8 သန်း, နှင့်ဥပဒေများနှင့်အချက်အလက်များနှစ်ဦးစလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်တစ်ခုအယူခံခုံရုံးနှင့်အတူ နောက်တဖန်, ဒီတိုးမြှင့်ဖို့အချို့သောပုံရသည်.
ဒုတိယ, တရားရုံးလူလိုအပ်သောအရည်အချင်းများနှင့်အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခ၏မရှိခြင်းနှင့်အတူအလားအလာအမြဲတမ်းတရားသူကြီးတို့၏ရေကူးကန်မဟုတ်ဘဲသေးငယ်သည်. ဒါဟာဖွယ်ရှိပြီးသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်ခုံသမာဓိလူကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောတူညီခုံသမာဓိလူကြီးများရေးစပ်ပါလိမ့်မည်.
နောက်ထပ်သိသာပြဿနာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရုံးစနစ်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ဘက်တော်သားဖြစ်ပါသည်, အရာ Cetas အဆိုပါအောက်မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အမြန်ရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်တာတွေကိုကြိုးစားနေ 1958 နယူးယော့ကွန်ဗင်းရှင်း. ဤအဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ခုံသမာဓိဆု၏အဓိပ္ပါယ်ကျေနပ်လိမ့်မည်ဟုအလွန်အမင်းမရှင်းလင်းသည်, အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းရဲ့ application ရဲ့လိုအပ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ "ဟုအဆိုပါဆုအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခံရသည်ဟုစောဒကတက်ပါလိမ့်မည်အဆိုပါပါတီများတင်သွင်းခဲ့ကြရာမှအမြဲတမ်းခုံသမာဓိအလောင်းများကို"ပုဒ်မငါအောက်မှာ(2) နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း၏, သို့သော်ဤငြင်းခုံ၏ခွန်အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရုံးစနစ်နောက်ဆုံးမှာယူသည့်ပုံစံပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်.
နောက်ဆုံး, Cetas နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂဆက်စပ်အတွက်, တစ်ဦးအမြဲတမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရုံးစနစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအီးယူစာချုပ်များနှင့်အတူလိုက်ဖက်မှု၏မေးခွန်းများကိုထမြောက်တော်မူခဲ့ပါသည်, လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းဤကိစ္စကိုတစ်ခုထင်မြင်ချက်များအတွက်တရားမျှတရေး၏ဥရောပတရားရုံးရည်ညွှန်းခံရဖွယ်ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရုံးစနစ်ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးပါလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်ပြောမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဟာဖြစ်ပါသည်, ကခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအယူခံယန္တရားစျေးကြီး ပို. ပင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းစေမယ့်ဖြစ်ကြောင်းအတော်လေးရှင်းပါတယ်ပေမယ့်.
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရားရုံးစနစ်အပေါ် Cetas သဘောတူစာချုပ်ကနေသက်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုအောက်တွင်ပြသထားပါသည်.
အဆိုပါ Cetas ပူးတွဲကော်မတီလိမ့်မည်, ဒီသဘောတူညီချက်များ၏အင်အားသုံးသို့ entry ကိုအပေါ်သို့, ခုံရုံး၏တဆယ်အဖွဲ့ဝင်များခန့်အပ်. ခုံရုံး၏အဖွဲ့ဝင်များငါးခုဥရောပသမဂ္ဂ၏အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်၏နိုင်ငံသားဖြစ်ရလိမ့်မည်, ငါးကနေဒါ၏နိုင်ငံသားဖြစ်ရလိမ့်မည် ငါးတတိယနိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံသားဖြစ်ရလိမ့်မည်.
အဆိုပါ Cetas ပူးတွဲကော်မတီသုံးခုရဲ့မြှောက်လဒ်အားဖြင့်ခုံရုံး၏အသင်းဝင်များ၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ဖို့သို့မဟုတ်လျော့ချဖို့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ. အပိုဒ်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်အပိုဆောင်းချိန်းတူညီတဲ့အခြေခံပေါ်မှာလုပ်ရမည် 2.
ခုံရုံး၏အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်များတရားစီရင်ရေးရုံးချိန်းအဘို့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများရှိလိုအပ်သောအရည်အချင်းများသိမ်းယူကြလိမ့်မည်, သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုအရည်အချင်းကို၏ဥပဒေပညာရှင်ဖြစ်. သူတို့ကပြည်သူ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုသရုပ်ပြခဲ့ကြရကြလိမ့်မည်. သူတို့အထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်သောနှစ်လိုဖွယ်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအတွက်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဥပဒေနှင့်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များအောက်မှာပေါ်ပေါက်အငြင်းပွားမှုများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာ.
ခုံရုံး၏အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်များသည်ဤပုဒ်မအညီခန့်အပ်ထားသောငါးနှစ်သက်တမ်းအဘို့ခန့်အပ်တာဝန်ခံရကြလိမ့်မည်, ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲတစ်ချိန်က. သို့သျောလညျး, အဆိုပါခုနစ်လုံး၏စည်းကမ်းချက်များ 15 ချက်ချင်းသဘောတူညီချက်များ၏အင်အားသုံးသို့ entry ကိုအပြီးခန့်အပ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်များ, အများကြီးကဆုံးဖြတ်ခံရဖို့, ခြောက်နှစ်မှတိုးချဲ့ရကြလိမ့်မည်. သူတို့သညျထအဖြစ်နေရာလွတ်ပြည့်စုံလိမ့်မည်. အဘယ်သူ၏ရုံးခန်း၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးမရသည့်ဆိုင်ရာခုံရုံး၏အဖွဲ့ဝင်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်တစ်ဦးကလူတစ်ဦးဟာသူ့အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ရဲ့သက်တမ်း၏ကျန်ရှိသောများအတွက်ရုံးကိုကိုင်ထားရကြလိမ့်မည်. အခြေခံသဘောအရ, နောက်ဆုံးဆုထုတ်ပေးသည်အထိသူသို့မဟုတ်သူမ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါဆိုင်ရာခုံရုံး၏ဌာနခွဲအပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခုံရုံး၏အဖွဲ့ဝင်ခွဲဝေမှုအပေါ်အစေခံရန်ဆက်လက်ဖြစ်နိုင်သည်.
အဆိုပါခုံရုံးခုံရုံး၏သုံးအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည်ဟုကွဲပြားမှုအတွက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုနားထောငျရကြလိမ့်မည်, တဦးတည်းဥရောပသမဂ္ဂ၏အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်၏အမျိုးသားရေးဖြစ်ရလိမ့်မည်ဘယ်သူကို၏, တကနေဒါ၏အမျိုးသားရေးနှင့်တတိယနိုင်ငံတအမျိုးသားပြန်လည်. အဆိုပါဌာနခွဲမှတတိယနိုင်ငံအမျိုးသားရေးသူခုံရုံး၏အဖွဲ့ဝင်ကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရကြလိမ့်မည်.
အတွင်း 90 အပိုဒ်အညီတစ်ဦးအရေးဆိုမှု၏တင်ပြချက်၏ရက်ပေါင်း 8.23, ခုံရုံး၏နိုင်ငံတော်သမ္မတတစ်ဦးအလှည့်အခြေခံပေါ်မှာအမှုကြားနာခုံရုံး၏ဌာနခွဲရေးသားခုံရုံး၏အဖွဲ့ဝင်များခန့်ရမည်, သင်းဖွဲ့များ၏ဖွဲ့စည်းမှုကျပန်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်ကြောင်းကိုသေချာ, အစေခံရန်အခုံရုံး၏အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များညီမျှအခွင့်အလမ်းပေးခြင်းစဉ်.
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်ဆိုင်ရာခုံရုံး၏ဒုတိယသမ္မတစည်းရုံးရေးကိစ္စများအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်တစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်သက်တမ်းအတွက်အဖြစ်ခန့်အပ်ပါလိမ့်မည်နှင့်တတိယနိုင်ငံများနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်သူခုံရုံး၏အဖွဲ့ဝင်များထဲမှစာရေးရေးဆွဲခံရကြလိမ့်မည်. သူတို့ဟာ Cetas ပူးတွဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများကစာရေးရေးဆွဲနေတဲ့အလှည့်များ၏အခြေခံပေါ်မှာဝတ်ပြုရမည်. နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုမရရှိနိုင်သောအခါတွင်အဆိုပါဒုတိယသမ္မတနိုင်ငံတော်သမ္မတနေရာတွင်အစားထိုးရကြလိမ့်မည်.
အပိုဒ်သို့ရာတွင် 6, အဆိုပါဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းပါတီများတစ်ဦးအမှုတတိယနိုင်ငံတစ်ခုနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ကျပန်းမှာအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရဖို့ခုံရုံး၏တစ်ဦးတည်းသောအဖွဲ့ဝင်များကမကြားလိုသည်ဟုသဘောတူစေခြင်းငှါ. အဆိုပါတုံ့ပြန်ခုံရုံး၏တစ်ဦးတည်းသောအဖွဲ့ဝင်များကကြားသိမှုရှိသည်ဖို့တောင်းဆိုသူများထံမှတောင်းဆိုမှုမှစာနာထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရကြမည်, အထူးသဖြင့်တောင်းဆိုသူတစ်ဦးအသေးသို့မဟုတ်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်တိုင်ကြားလျော်ကြေးပေးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတော်လေးနိမ့်သည်အဘယ်မှာရှိ. ထိုသို့သောတောင်းဆိုချက်သည်ခုံရုံး၏ဌာနခွဲများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမတိုင်မီလုပ်ရမည်.
သူတို့ရဲ့ရရှိနိုင်စေရန်အလို့ငှာ, ခုံရုံး၏အသင်းဝင်များအတွက် Cetas ပူးတွဲကော်မတီကဆုံးဖြတ်ခံရဖို့လစဉ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရကြလိမ့်မည်.
အပိုဒ်အတွက်ရည်ညွှန်းအဆိုပါအခကြေးငွေ 12 အဆိုပါ ICSID အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးကစီမံခန့်ခွဲအကောင့်တစ်ခုထဲသို့နှစ်ဦးစလုံးပါတီများအားဖြင့်အညီအမျှပေးဆောင်ရကြလိမ့်မည်. တဦးတည်းပါတီအခြားပါတီဆပ်ဖို့ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ၎င်းထိန်းသိမ်းထားအခကြေးငွေပေးချေရန်ပျက်ကွက်သောဖြစ်ရပ်အတွက်. တစ်ပါတီအားဖြင့်မဆိုထိုကဲ့သို့ကြွေးကျန်ပေးဆောင်ဆက်လက်တည်ရှိဦးမည်, သင့်လျော်သောအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူ.
အဆိုပါ Cetas ပူးတွဲကော်မတီအပိုဒ်အညီဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မဟုတ်လျှင် 15, ကွဲပြားခြင်းအပေါ်ခုံရုံး၏အသင်းဝင်များ၏အဖိုးအခနဲ့ကုန်ကျစရိတ်၏ပမာဏတစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုစကားကိုနားထောငျဖို့ဖွဲ့စည်း, အပိုဒ်အတွက်ရည်ညွှန်းသည့်အဖိုးအခထက်အခြား 12, သူတို့အစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားခံရကြလိမ့်မည် 14(1) အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအတွက်အရေးဆိုမှု၏တင်ပြချက်၏နေ့စွဲအပေါ်အင်အားသုံးအတွက် ICSID ကွန်ဗင်းရှင်း၏စည်းမျဉ်းများနှင့်အအပိုဒ်နှင့်အညီအတွက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းပါတီများတို့တွင်ဆိုင်ရာခုံရုံးတို့ကခွဲဝေ၏ 8.39.5.
အဆိုပါ Cetas ပူးတွဲကော်မတီ, မေလ, ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်, ပုံမှန်လစာသို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အခကြေးငွေနှင့်အခြားစရိတ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်အသွင်ပြောင်း, နှင့်သက်ဆိုင်သောပုံစံများနှင့်အခြေအနေများကိုဆုံးဖြတ်.
အဆိုပါ ICSID အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးခုံရုံးအဘို့အအတွင်းဝန်ရုံးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်သင့်လျော်သောထောက်ခံမှုနှင့်အတူကပေးရကြလိမ့်မည်.
အဆိုပါ Cetas ပူးတွဲကော်မတီအပိုဒ်ဖို့ချိန်းအညီလုပ်မမူလျှင်2အတွင်း 90 တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းဘို့တင်သွင်းသောနေ့မှရက်ပေါင်း, ICSID ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရကြမည်, တစ်ခုခုကိုငြင်းခုံပါတီများ၏မေတ္တာရပ်ခံချက်မှာခုံရုံး၏သုံးအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည်ဟုကွဲပြားခြင်းကိုခနျ့အပျ, အဆိုပါဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းပါတီများအမှုခုံရုံး၏တစ်ဦးတည်းသောအဖွဲ့ဝင်များကမကြားလိုသည်သဘောတူညီခဲ့ကြမဟုတ်လျှင်. ICSID ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်လက်ရှိလျာထားရာမှကျပန်းရွေးချယ်ရေးအားဖြင့်ရက်ချိန်းရကြလိမ့်မည်. အဆိုပါဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းပါတီများမဟုတ်ရင်သဘောတူမဟုတ်လျှင် ICSID ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကုလားထိုင်အဖြစ်ကနေဒါသို့မဟုတ်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်ဖြစ်စေ၏အမျိုးသားရေးကိုခနျ့အပျမညျမဟု.
အဆိုပါအယူခံခုံရုံးထောက်စေခြင်းငှါ, အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဆိုင်ရာခုံရုံးရဲ့ဆု modify သို့မဟုတ် reverse:
(တစ်ဦး) သက်ဆိုင်ပညတ်တရား၏ application သို့မဟုတ်အနက်အတွက်အမှားအယွင်းများ;
(ခ) အဆိုပါအချက်အလက်များ၏ကြေးဇူးတငျကွောငျး၌ထငျရှားအမှားများ, သက်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းပညတ်တရား၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးအပါအဝင်;
(က c) အပိုဒ်ထွက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံ 52(1) (တစ်ဦး) ဖြတ်. (အီး) အဆိုပါ ICSID ကွန်ဗင်းရှင်း၏, ယခုအထိသူတို့အပိုဒ်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းကြသည်မဟုတ်အဖြစ် (တစ်ဦး) နှင့် (ခ).
ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ်အတွက်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အယူခံခုံရုံး၏အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်များတစ်ချိန်တည်းမှာ Cetas ပူးတွဲကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကခန့်အပ်ခံရကြလိမ့်မည် 7.
အဆိုပါအယူခံခုံရုံး၏အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်များဆောင်းပါးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရကြလိမ့်မည် 8.27.4 နှင့်ပုဒ်မနှင့်အတူလိုက်လျော 8.30.
ဆောင်းပါးများ 8.36 နှင့် 8.38 အဆိုပါအယူခံခုံရုံးရှေ့တော်၌ထိုတရားစွဲဆိုမှုမှလျှောက်ထားရမည်.
အဆိုပါ Cetas ပူးတွဲကော်မတီချက်ချင်းအယူခံခုံရုံး၏လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာနှင့်အဖွဲ့အစည်းကိစ္စရပ်များထွက် setting ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်ရကြလိမ့်မည်:
(ခ) ကနဦးနှင့်အယူခံ၏အကငျြ့ဘို့လုပျထုံးလုပျနညျး, ဆု၏ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ခုံရုံးမှပြဿနာများကိုနောက်ကျောကိုရည်ညွှန်းအဘို့နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, သင့်လျော်သောအဖြစ်;
(က c) အဆိုပါအယူခံခုံရုံးအပေါ်တစ်ဦးအခန်းအလွတ်ဖြည့်စွက်အဘို့နှင့်အယူခံခုံရုံး၏ဌာနခွဲအပေါ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတစ်ဦးအမှုကိုနားထောငျဖို့ဖွဲ့စည်း;
(f) အဆိုပါအယူခံခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်များ၏နံပါတ်; နှင့်
အဆိုပါန်ဆောင်မှုများအပေါ်ကော်မတီနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခါအားလျော်စွာအဆိုပါအယူခံခုံရုံး၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရကြလိမ့်မည်နှင့် Cetas ပူးတွဲကော်မတီမှအကြံပြုချက်များစေ. အဆိုပါ Cetas ပူးတွဲကော်မတီအပိုဒ်အတွက်ရည်ညွှန်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်စေခြင်းငှါ 7, လိုအပ်ခဲ့လျှင်.
(တစ်ဦး) တစ်ဦးငြင်းခုံပါတီအတွင်းအယူခံခုံရုံးဤပုဒ်မအညီပြန်ဆိုထားတဲ့ဆုအယူခံစေခြင်းငှါ 90 ယင်း၏ထုတ်ပေးရေးပြီးနောက်ရက်ပေါင်း;
(ခ) တစ်ဦးငြင်းခုံပါတီပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့မရှာရကြမည်, ဘေးဖယ်ထား, ပလပ်, ဒီပုဒ်မတစ်ခုအောက်တွင်ဆုနှင့်စပ်လျဉ်းအဖြစ်ကိုအခြားအလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြင်ဆင်သို့မဟုတ်အစပျိုး;
(က c) တစ်ဆုချီးမြှင့်အပိုဒ်အညီပွနျဆိုထားသော 8.39 နောက်ဆုံးစဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်တစ်ခုနှင့်ဆုချီးမြှင့်၏ဘက်တော်သားမ action ကိုဖြစ်စေသည်အထိယူဆောင်စေခြင်းငှါ:
(ကိုယ့်) 90 ခုံရုံးအားဖြင့်ဆုချီးမြှင့်များ၏ထုတ်ပေးရေးထံမှရက်ပေါင်းကြာခဲ့ပြီးနှင့်မျှမတို့အယူခံအစပျိုးခဲ့ပြီး
(ii) တစ်ခုအစပျိုးအယူခံပယ်ချသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီး; သို့မဟုတ်
(iii) 90 ရက်အယူခံခုံရုံးအားဖြင့်တစ်ဦးချီးမြှင့်ကနေကြာခဲ့ကြခြင်းနှင့်အယူခံခုံရုံးပြန်ဆိုင်ရာခုံရုံးမှဒီကိစ္စကိုရည်ညွှန်းမထားပါဘူး;
(ဃ) အဆိုပါအယူခံခုံရုံးကနောက်ဆုံးဆုအပိုဒ်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နောက်ဆုံးဆုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကြလိမ့်မည် 8.41; နှင့်
(အီး) ဆောင်းပါး 8.41.3 လျှောက်ထားရမည်မဟုတ်.
အဆိုပါပါတီများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအငြင်းပွားမှုများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အခြားကုန်သွယ်ဖက်နဲ့ဘက်ပေါင်းစုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံရုံးနှင့်အယူခံယန္တရား၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလိုက်လိမ့်မည်. ထိုကဲ့သို့သောဘက်ပေါင်းစုံယန္တရား၏တည်ထောင်ခြင်းအပေါ်သို့, အဆိုပါ Cetas ပူးတွဲကော်မတီကဒီပုဒ်မအောက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအငြင်းပွားမှုများအတွက်ဘက်ပေါင်းစုံယန္တရားအညီဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပေးမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နှင့်သင့်လျော်သောကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာအစီအစဉ်များလုပ်ရမည်.
ခုံရုံး၏အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်များလွတ်လပ်သောဖြစ်ရလိမ့်မည်. သူတို့ကသူတို့ကမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကနေညွှန်ကြားချက်ယူရမည်မဟုတ်ဆို government.10 နှင့်အတူဆက်နွယ်လိမ့်မည်မဟုတ်, အငြင်းပွားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သို့မဟုတ်အစိုးရ. သူတို့ကအကျိုးစီးပွားတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ပဋိပက္ခဖန်တီးမယ်လို့မဆိုအငြင်းပွားမှုများ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရမည်မဟုတ်. သူတို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်သို့မဟုတ်ပုဒ်မအညီမွေးစားမည်သည့်ဖြည့်စွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတွက်အကျိုးစီးပွား၏ပဋိပက္ခအပေါ်နိုင်ငံတကာဘားအစည်းအရုံးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူလိုက်နာရကြလိမ့်မည် 8.44.2. ဖြည့်စွက်ကာ, ချိန်းအပေါ်သို့, သူတို့ပေးသောအကြံကိုအဖြစ်သို့မဟုတ်ဤအောက်မှာမဆိုဆိုင်းငံ့ထားသို့မဟုတ်အသစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအငြင်းပွားမှုသို့မဟုတ်အခြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အတွက်ပါတီ-ခန့်အပ်ထားသောကျွမ်းကျင်သူသို့မဟုတ်သကျသခေံအဖြစ်သရုပ်ဆောင်မှရှောင်ကြဉ်ရကြလိမ့်မည်.
တစ်ဦးငြင်းခုံပါတီဆိုင်ရာခုံရုံး၏အဖွဲ့ဝင်အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခရှိကြောင်းစဉ်းစားခဲ့လျှင်, ထိုသို့ချိန်းဖို့တရားမျှတမှု၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး၏နိုင်ငံတော်သမ္မတမှစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအသိပေးစာပေးပို့ရကြလိမ့်မည်. စိန်ခေါ်မှု၏အသိပေးစာအတွင်းပေးပို့ရမည် 15 ခုံရုံး၏ဌာနခွဲများ၏ဖွဲ့စည်းမှုဟာငြင်းခုံပါတီမှဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးသောရက်စွဲ၏ရက်ပေါင်း, သို့မဟုတ်အတွင်း 15 သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်၎င်း၏အသိပညာမှလာသောအပေါ်ရက်စွဲ၏ရက်ပေါင်း, သူတို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည့်ဌာနဖွဲ့စည်းမှု၏အချိန်မှာလူသိများခဲ့ကြပါဘူးလျှင်. စိန်ခေါ်မှု၏အသိပေးစာစိန်ခေါ်များအတွက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံဖော်ပြရကြလိမ့်မည်.
အကယ်., အတွင်း 15 စိန်ခေါ်မှု၏အသိပေးစာသည့် နေ့မှစ. ရက်ပေါင်း, ခုံရုံး၏စိန်ခေါ်အဖွဲ့ဝင်ပထမတန်းကနေနုတ်ထွက်ဖို့မရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်, တရားရေးနိုင်ငံတကာတရားရုံး၏နိုင်ငံတော်သမ္မတရကြမည်, အဆိုပါဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းပါတီများကြားနာပြီးနောက်နှင့်ဆိုင်ရာခုံရုံး၏အဖွဲ့ဝင်မဆိုလေ့လာတွေ့ရှိချက်တင်သွင်းဖို့အခွင့်အလမ်းပေးအပြီး, အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်ပြန် 45 စိန်ခေါ်မှု၏အသိပေးစာလက်ခံရရှိ၏ရက်ပေါင်းနှင့်ငြင်းခုံခြင်းပါတီများနှင့်ကွဲပြားခြင်း၏အခြားအဖွဲ့ဝင်များကိုအကြောင်းကြား. ခုံရုံး၏အဖွဲ့ဝင်များ၏အရည်အချင်းမပြည့်မှီသို့မဟုတ်နှုတ်ထွက်စာကနေရရှိလာတဲ့တစ်ဦးကအခန်းအလွတ်ချက်ချင်းပြည့်စုံလိမ့်မည်.
ခုံရုံး၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကနေအကြောင်းပြချက်ထောက်ခံချက်အပေါ်သို့, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပူးတွဲပဏာမခြေလှမ်းအပေါ်, အဆိုပါပါတီများ, အဆိုပါ Cetas ပူးတွဲကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်, သူသို့မဟုတ်သူမ၏အပြုအမူအပိုဒ်ထွက်သတ်မှတ်တာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုဖြစ်ပါတယ်ရှိရာဆိုင်ရာခုံရုံးအနေဖြင့်တစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်ကိုဖယ်ရှားစေခြင်းငှါ 1 နှင့်ဆိုင်ရာခုံရုံး၏သူသို့မဟုတ်သူမ၏ဆက်လက်အဖွဲ့ဝင်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်.
 ဖြစ်စေပါတီအစားမဆိုနိုင်ငံသားအဖြစ်၏ဆိုင်ရာခုံရုံး၏ငါးအဖွဲ့ဝင်များမှတက်ကိုခနျ့အပျဖို့အဆိုပြုစေခြင်းငှါ. ဒီကိစ္စမှာ, ခုံရုံး၏ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့ဝင်များသည်ဤအပိုဒ်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ချိန်းအဆိုပြုထားသောပါတီများ၏နိုင်ငံသားဖြစ်စဉ်းစားရကြလိမ့်မည်.
အောက်မှာ Filed: ad hoc အနုညာတစီရင်, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, အနုညာတစီရင်၏တရားရုံး, ICSID အနုညာတစီရင်, UNCITRAL အနုညာတစီရင်